Fiadidiana ny Tanàna : “Tsy misy fanilihana taxi fa fanatsarana no hatao…” | NewsMada
Fiadidiana ny Tanàna : “Tsy misy fanilihana taxi fa fanatsarana no hatao…”
“Anton’ny fihaonana ny fitadiavana ny tombontsoan’ny mpitatitra taxi. Tsy misy ary tsy hisy ny fanilihana ireo taxi efa miasa. Fanatsarana izany no atao ao anatin’ny fanarahan-dalàna. Ny mitady asa aza amin’izao fotoana izao efa tena manahirana ka hopotehina amin’ny asany ny olona efa manana asa toy ny tompona taxi sy ny mpamily taxi. Tsy hanao izany velively ny kaominina”, hoy ny ben’ny Tanàna, Ravalomanana Lalao, tetsy amin’ny lapan’ny Tanàna Analakely, omaly. Nihaona tamin’ireo mpisehatra amin’ny fiarakaretsaka ny CUA. Nafana ny fifandaharana ary samy naneho ny heviny sy ny ahiahiny ny rehetra mba tsy haha-tompon-trano mihono. Nohamafisin’ny ben’ny Tanàna fa tanjona ny hananana mpitatitra matihanina sy ara-dalàna. “Mba manana fitaovam-pitaterana mahafapo sy miantoka ny filaminan-tsaina ny mpanjifa. Eo koa ny fitaterana lavitry ny loza. Manohana sy manampy ary mitsinjo ireo mpitatitra matihanina sy ara-dalàna ny CUA. Na taxi na taxibe, na mpitatitra entana, ka mahaloa ara-dalàna ny hetra sy manana taratasy ilaina amin’ny fitaterana ary afaka manome fahafaham-po sy filaminana ho an’ny mpanjifa”, hoy ihany izy. Nohitsiny fa manampy ny mpitatitra hanafoana sy manenjika ireo mpangalatra misehatra amin’ny asa fitateram-bahoaka, mamono ny mpitatitra matihanina sy ara-dalàna ny kaominina.
Noresahina koa ireo feo tsy marina sy naely tamin’ny mpitondra taxi. Ohatra ny teboka 104, tsy misy sady diso tanteraka. Ny fanilihana ny 2CV sy ny 4L, na fiara antitra. “Tsy misy izany ary diso tanteraka koa. Tsy mitombina koa ny resaka fampiakarana ny saran’ny fitsirihana. Ny saram-pitsirihana teo Antsakaviro ihany no hampiasain’ny Omavet. Diso koa ny resaka fanafaran’ny CUA fiara avy any ivelany”, hoy ny CUA.
Na izany aza, mbola azo hifampidinihana mba ho tombontsoan’ny tanàna sy ny vahoaka ary ny mpitatitra ny bokin’andraikitra, mifehy ny fampiharana ara-teknika sy ara-tsosialy.
Nivoaka ny efitrano fivoriana…
Nivoaka ny trano ireo mpiara-dia amin’ny FTAR nandritra ny fihaonana. Vitsy anisa anefa izy ireo fa mbola feno hipoka hatrany ny trano. Tapaka nandritra ny fihaonana fa hatsangana ny vaomiera hanohizana sy ho fampiharana ny fanatsarana eo amin’ny fitaterana. Hitohy amin’ny asabotsy 28 oktobra izao ny fihaonambe.
Tsiahivina fa miisa 7800 ny isan’ireo mpitatitra amin’ny taxi eto an-dRenivohitra. Ahitana mpikambana ao amin’ny FTAR sy avy amin’ny Astazon izy ireo, ankoatra ireo tsy mpikambana fa mandeha amin’ny tenany, tonga niatrika izany.